ရော်နယ်ဒိုရဲ့ Siuuu ပုံစံနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ဂျူနီယာ ရော်နယ်ဒို
April 14, 2022 author wyne 0
ခရစ္စတီယာနိုဂျူနီယာဟာ မန်ယူမှာ သူ့အဖေရဲ့ခြေရာဆက်နင်းနေသလို နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းပြီးတော့လည်း စီရော်နယ်ဒိုရဲ့နာမည်ကြီး အောင်ပွဲပုံစံဖြစ်တဲ့ Siuuu အတိုင်းအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့သလို ဂျူနီယာကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီမှာ ယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီအသင်းနဲ့ စာချုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကတည်းက ပရိသတ်တွေဟာ ဒီ ၁၁ နှစ်သားခြေစွမ်းတိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ လေ့ကျင့်ရေးက အဲဒီကောင်လေးရဲ့ဘောလုံးစကေးဗီဒီယိုတွေအရ […]
လီဗာပူးအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၂၀ အထက်သွင်းယူနိုင်တဲ့ စတုတ္ထမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာတဲ့ ဖာမီနို
ဥရောပညတွေဆို သူဟာ အားကိုးရသူတစ်ယောက်ဆိုတာ လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုး ဖာမီနိုတစ်ယောက် ထပ်မံသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဘရာဇီးသားဟာ သူကိုယ်တိုင် ဂိုးသွင်းနိုင်ရေးထက် အသင်းအတွက် ပိုဦးစားပေးသူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိထားကြပြီးသားပါ။ တိုက်စစ်မှာ အပြိုင်အဆိုင်များလာလို့ သူဟာ ဒီရာသီ လီဗာပူးမှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့် မရတော့ပေမယ့် ဝင်ကစားရတဲ့အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးပေးဆပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးသွင်းမှတ်တမ်းကောင်းရှိထားတဲ့ ဖာမီနိုဟာ ဘင်ဖီကာနဲ့ဒုတိယအကျော့မှာလည်း […]
ဥမင်လျှောက်လမ်းအထိ ရန်ပွဲမပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ တီကိုနဲ့ စီးတီးတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်
အက်သလက်တီကိုနဲ့မန်စီးတီးတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ဒုတိယအကျော့က နောက်ဆုံးမိနစ်တွေဟာ နှစ်သင်းအကြား ရုန်းရင်ဆန်ခတ်မှုတွေနဲ့ အကျည်းတန်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းဘေးစည်းပေါ်မှာ မန်စီးတီးကြယ်ပွင့်ဖိုဒန်ကို အက်သလက်တီကိုနောက်ခံလူဖိလစ်ပီက ဖျက်ထုတ်မှုလုပ်လိုက်တာက စတင်ခဲ့တာပါ။ ကွင်းစည်းအပြင်ဘက်မှာ ဖိုဒန်က လူးလိမ့်နေချိန် နောက်ထပ်တီကိုနောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆာဗစ်က ဆွဲထူဖို့ လုပ်ရာကနေ နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီဖြစ်ရပ်မှာ ဖိလစ်ပီဟာ အနီကတ်ပြထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပြီး တီကိုက ဆာဗစ်နဲ့ မန်စီးတီးက နသန်အကီတို့ဟာလည်း […]
ဒတ်ချ်နည်းပြကြီးဗန်ဟားလ် ကျရှုံးခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာမြေမှာ အစမ်းသပ်ခံဖို့ရောက်လာတော့မယ့် အဲရစ်တန်ဟက်
April 13, 2022 author wyne 0
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နည်းပြသစ်အဖြစ် အဲရစ်တန်ဟက်ကို ခန့်အပ်ဖို့ နှုတ်အားဖြင့်သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ အေဂျက်စ်နည်းပြဘဝမှာ အသင်းကို ပြည်တွင်းဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေရယူပေးခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း အဆင့်တစ်ခုအထိပြန်ရောက်အောင်ဆွဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ အဲရစ်တန်ဟက်ဟာ ယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အင်တာဗျူးမှာကတည်းက အဆင်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေက အဲရစ်တန်ဟက်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို နှစ်သက်သဘောကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ယူနိုက်တက်နည်းပြရာထူးအတွက် ပိုချက်တီနိုနဲ့အဲရစ်တန်ဟက်တို့အပြိုင်ရေပန်းစားခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ အဲရစ်တန်ဟက်က ပြတ်ပြတ်သားသားအသာရနေပြီး အခုဆိုရင် ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ […]
နာဂယ်လ်စမန်းကို ဘိုင်ယန်ပရိသတ်တွေဆဲဆိုနေပြီး ရာထူးကနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆို
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပရိသတ်တွေဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ကထွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အသင်းနည်းပြဖြစ်သူနာဂယ်လ်စမန်းကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆဲဆိုကြတဲ့အထိ ဒေါသပေါက်ကွဲနေပြီး တချို့က နည်းပြရာထူးကထုတ်ပစ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ဗီလာရီးယဲလ်လို အလယ်အလတ်အသင်းနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ပထမအကျော့အဝေးကွင်းမှာ(၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သလို ဒုတိယအကျော့မှာလည်း အနိုင်မရခဲ့ဘဲ (၁-၁)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တာကြောင့် နှစ်ကျော့ပေါင်း(၂-၁)ဂိုးရလဒ်နဲ့ကွာတားဖိုင်နယ်ကနေထွက်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ပရိသတ်တွေဟာ နည်းပြနာဂယ်လ်စမန်းရဲ့လူစားလဲပုံတွေအပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေပြီး ပွဲပြီးခါနီးမှာ လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ်အစား အယ်လ်ဖွန်ဆိုဒေးဗီးစ်ကို […]
ဆာလာ ပြဿနာကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမလဲ ကလော့?
မန်ချက်စတာ စီးတီး နှင့် လီဗာပူးလ်တို့ ( ၂-၂ ) သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီး ထူးခြားတဲ့ အချက်အလက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ မိုဆာလာဟာ နိုင်ငံ နှင့် ကလပ်အသင်းအတွက် open play ကနေ ( ၁၀ ) ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိတာ ဖြစ်ပြီး […]
အမ်မရီရဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကို ရင်နာစရာဖြစ်စေပြီလား?
ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြအူနိုင်းအမ်မရီဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဂျာမန်ထိပ်သီးဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ ဝေးကွာနေတဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ စိတ်ပျက်စရာရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် တစ်ရာသီကျော်သာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ရပြီး ၂၀၁၉၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ရာထူးကအထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အူနိုင်းအမ်မရီဟာ ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းမှာတော့ သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတွေရယူပေးနေတာကြောင့် အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ရင်နာစရာလို့ပြောရမှာပါပဲ။ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လကမှ ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းကို စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အူနိုင်းအမ်မရီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက […]
အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိနေပေမယ့် ထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်းပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့မိုဒရစ်ကို ပရိသတ်တွေချီးကျူး
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ခရိုအေးရှားဝါရင့်ကွင်းလယ်လူမိုဒရစ်ဟာ အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်းပြသခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက မိုဒရစ်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချီးကျူးရေးသားနေကြပါတယ်။ မိုဒရစ်ဟာ ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကစားပြနေပြီး ချယ်လ်ဆီးနဲ့ကွာတားဖိုင်နယ်ပထမအကျော့တုန်းက ကွင်းလယ်တစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်ကစားခဲ့သလို ဒုတိယအကျော့ပွဲမှာလည်း အရေးပါတဲ့ချေပဂိုးရအောင် လှလှပပဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက (၃-၀)ဂိုးပြတ်နဲ့ဦးဆောင် ထားချိန်မှာ ရီးယဲလ်အသင်း ချေပဂိုးပြန်ရဖို့အသည်းအသန်လိုအပ်နေပြီး မိနစ်(၈၀)မှာ […]
ယူနိုက်တက်နည်းပြသစ်အပေါ် လက်ရှိ နည်းပြလောကရဲ့ ဆရာနှစ်ဆူရဲ့အမြင်
အခုချိန်မှာ နှုတ်ရေးအရ သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်လို့ အဲရစ်တန်ဟက်ဟာ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပဲ မန်ယူရဲ့အမြဲတမ်းနည်းပြသစ်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ သူ့ကို မန်ယူနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးခွန်ထုတ်သူက အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်အများစုကလည်း အဲဒီနယ်သာလန်နည်းပြကို ခန့်အပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ထောက်ခံမှုရှိခဲ့ကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် အဲဒီအေဂျက်နည်းပြဟာ ဘဝတူနည်းပြတွေရဲ့လေးစားမှုကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့ဘောလုံးမှာ လီဗာပူးနည်းပြဂျာဂင်ကလော့ပ်နဲ့ မန်စီးတီးနည်ပြ ဂွါဒီယိုလာတို့ဟာ အကောင်းဆုံးနည်းပြတွေဖြစ်ကြတာပါ။ […]
နာဂယ်စ်မန်းကို စကားလုံး အပြင်းစားတွေနဲ့ ဒဲ့ဖဲ့လိုက်တဲ့ ပါဂျယ်ရို
ဗီလာရီးရဲအသင်းဟာ ယခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်မြေမှာ ( ၁-၀ ) ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အဝါရောင် ရေငုတ်သင်္ဘောဟာ ဂျာမနီမြေမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ( ၁-၁ ) သ‌ရေကစားပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ သမိုင်းဝင် အောင်ပွဲအပြီးမှာ […]